musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa kununura mishoni yeAfghanistan mukuzara kuzere
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Lufthansa yakayerera kupfuura 1,500 vapoteri veAfghan zvakachengeteka kuGerman
Lufthansa ichaenderera mberi nekushandisa dzimwe ndege kubva kuTashkent mumazuva anotevera mukubatana pamwe neGerman Kunze Hofisi.
Kubva vhiki rimwe chete, vanhu vanopfuura chiuru nemazana mashanu vakaendeswa kuGerman kubva kuTashkent nendege gumi nembiri.
Lufthansa timu yekutarisira inotarisira vanotsvaga kuchengetedza mushure mekuuya.
Dzimwe ndege dzakarongwa mumazuva anotevera.
Kwesvondo rapfuura, Lufthansa yanga ichigadzira ndege kuti ibhururutse vapoteri vanobva kuCentral Asia nyika kuenda kuGerman. Ndege yeAirbus 340 refu-refu inoshandiswa mune imwe neimwe kesi. Parizvino, mazuva ese nendege dzaunza kuFrankfurt vanhu vanopfuura chiuru nemazana mashanu.
Pakusvika muFrankfurt, timu yekutsigira yeLufthansa inobatsira vatsva kusvika nechikafu, zvinwiwa uye zvipfeko, uye inopa kwekutanga kurapwa uye kwepfungwa. Kune vana vazhinji vava kumhara muFrankfurt, kona yekutamba uye yekupenda yakagadzwa uye matoyi akapihwa.
Lufthansa yakapihwa chibvumirano nehurumende yeGerman kuti ibatsire pakubvisa vapoteri veAfghan nendege yadzo yakarongwa yeAirbus A340. Ndege yekutakura mureza weGerman haisi kubhururuka ichienda kuAfghanistan asi panzvimbo pezvo ichiunganidza vanhu vakabviswa munyika neBundeswehr (mauto eGerman) kuDhaha, Qatar neTashkent, Uzbekistan.